भुकम्पले ढ’ला’ए’प’छि ७० लाख खर्च गरेर बनाएको घर क्षणभरमै ब’गर ब’न्यो : आँ’सु रो’कि’ए’का छैनन् !(भिडियो सहित) – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ ०३, २०७८ समय: १७:४७:३३
“मेरो घरबाट खोलामा पुग्न झण्डै दसमिनेट लाग्थ्यो । अहिले करेसामा खो’लो सु”सा’इ’रहेको छ । कतिबेला लाने हो प”त्तो छैन । त्यत्रो बजार ब’ग’र बनाइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “अरूको हेरेर पनि चि’त्त बुझाएको छु ।” पहिराको ड”रले भू’कम्प गएको थ’लोमा घर नबनाएका उनले खो’लाको मु’खमा परिएला भनेर कहिल्यै सोचेनन् । सोचुन् पनि कसरी ! इ’न्द्रा’वतीको त्यो रूपसँगको उनको सा’क्षा’त्का’र कहिल्यै भएको थिएन ।
“सबैथोक गु’मा’एप’छि सरकारको बाटो हेर्न मन लाग्दो रहेछ । सक्ने हुँदा सरकारको बाटो हेरिएको पनि थिएन,” उनी हा’रमा’न्नु हुँदै सुनाउँछन्, “सरकार ! हामी बोल्न जान्दैनौँ । घर व्यवहारले थि’चे’को छ । ऋण छ । तिर्ने आधार खोलाले खाइदिइहाल्यो । हामी बोल्न पनि जान्दैनौँ । हामीलाई हेर है ।”– बाह्रखरी बाट साभार – अक्षर काका